जनगणना: ५४ वटा प्रश्न किन?
जनगणना मधु राई
किरातीहरूबीचको विविधताले गर्दा थर, भाषा लगायत धर्म सम्बन्धी अन्योल देखिन्छ। त्यसमाथि गैरकिराती गणकलाई विस्तृत जानकारी नहुँदा किरातीबारे सही तथ्याङ्क आउनेमा ढुक्क हुन सकिन्न।
मानसिक स्वास्थ्यका लागि सचेतना
मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनस्तरसम्म सचेतना जगाउन सकियो भने मानसिक रोगबाट त बचिन्छ नै, कैयौंलाई आत्महत्याबाट पनि जोगाउन सकिन्छ।
किन सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा पर्दैनन् महिलाका विषय? स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यममा पुरुष र पुरुषवादी सोच हाबी हुँदा महिला र महिलासँग सम्बन्धित विषयले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्।
महामारी : बालबालिकालाई स्वावलम्बी बनाउने मौका कोरोनाभाइरसको महाकारीका कारण गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि स्कूल जान नपाएका बालबालिकालाई घरमै जीवनोपयोगी सीप सिकाएर स्वाबलम्बी बन्न प्रेरित गर्न सकिन्छ।
संकटमा कसरी गर्ने सीपको उपयोग? कोभिड–१९ को महामारीका बेला एक–अर्कासँग भएको सीपको उपयोग र विस्तार गर्न सकियो भने संकटको समय कटाउन त सजिलो हुन्छ नै, आयआर्जन पनि गर्न सकिन्छ।
कक्षाकोठामा नेपाली बालगीतको प्रयोग खोइ? अभिनय गर्दै गाइने बालगीतमार्फत बालबालिकाले शब्दको ज्ञान र स्मरण मात्र नभई अर्थसमेत सजिलै बुझ्छन्। तर, अंग्रेजी भाषाका बालगीतलाई मात्र मह‍त्त्व दिइँदा नेपाली भाषामाथि बालबालिकाको पकड कमजोर भइरहेको छ।
अघि बढेका मनकारी हातहरू भौतिक तथा सामाजिक विकासमा सरकार कटिबद्ध हुन त जरुरी छ नै, तर सरकारको मात्र जिम्मेवारी भने होइन। आफ्नो टोल र बस्ती रूपान्तरण गर्न आफैँ लागि परेका केही समाजसेवीहरू उदाहरणीय बनेका छन्।
किन बढ्दैछ बलात्कार ? बालिका र महिलाका लागि असुरक्षित बन्दै गएको घरपरिवार र समाजलाई हिंसामुक्त बनाउन उचित कानूनी व्यवस्था, शैक्षिक सुधार लगायतका लागि तीन वटै तहका सरकारको अग्रसरता आवश्यक छ।
बालबालिकालाई सिकाउनुपर्ने जीवनोपयोगी सीप पहिले अभिभावक र शिक्षकलाई !
बालबालिकाले जीवनयापनका लागि नसिकी नहुने पहिलो सीप हो, खाना खानु। तर, बहुसंख्यक आमाहरुकै कारण यो सीप सिक्नुपर्ने उमेरका बालबालिका सिकाइबाट वञ्चित छन्। त्यसकारण हाम्रा बालबालिका परनिर्भरताको पहिलो पाठ आफ्नै अभिभावकबाट सिक्दैछन्।
कहिलेसम्म अखाद्य वस्तु सेवन गर्ने ?
चाडबाड र अरु समयमा पनि मिसावटयुक्त खाद्य सामग्री सेवन गर्न उपभोक्ताहरु अभिशप्त छन्। किराना पसल मात्र होइन भाटभटेनी र सेन्ट्रल बजार जस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानले समेत उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गरेको देखिंदैन।
विद्यालयको पाठ्यक्रममै किन समावेश नगर्ने यौनहिंसा विरुद्धको शिक्षा ?
पूर्व प्राथमिक तहका पाठ्यक्रमदेखि नै यौनहिंसालाई निरुत्साहित गर्ने पाठ्यसामग्री समावेश गर्न जरुरी छ। जसले लैङ्गिक विभेद हटाइ समभाव पैदा गर्छ। बालापनमा बालअधिकारका आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न पाएकाहरुले मात्र अरुको अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छन्।